Wararka - Daaweynta Jajabka ah ee Co2 Laser Vs. Jajabinta Erbium Laser Resorfacing
Jajab Co2 Laser Daaweynta Vs. Jajabinta Erbium Laser Resorfacing
Jajabinta CO2 Laser Resurfacing
Sida ay u shaqeyso: Qalabka dib-u-soo-saarka leysarka ee jajabka ah ee loo yaqaan 'CO2' laser laser waxay adeegsadaan iftiinka infrared-ka ee lagu sii daayo tuubbo kaarboon dioxide ka buuxsantay si loo abuuro nabarro microthermal ah oo ku jira unugyada la beegsaday. Maaddaama iftiinka uu nuugo maqaarka, nudaha ayaa uumi baxa, taasoo horseedda ka saarista unugyada maqaarka ee gaboobay iyo kuwa dhaawacmay ee lakabka sare ee aagga la daweeyay. Burburka kuleylka ah ee ay keento leysarka ayaa sidoo kale qandaraas siiya kolajka jira, kaas oo xoojiya maqaarka isla markaana xoojiya wax soo saarka kolajiin cusub oo ay weheliso kor u kaca cusbooneysiinta unugyada.
Faa'iidooyinka iyo qasaaraha: In kasta oo aan qalliin ahayn, qaabkan daaweyntu waa ka duullaan badan yahay daaweynta badan ee maqaarka dib u soo cusbooneysiiya, taas oo u turjumi karta natiijooyin badan oo la arki karo. Intaas marka la dhaho, xaqiiqda ah inay duulaan badan tahay ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in seddex qaybood ama dhammaystirid buuxda ay lagama maarmaan u noqon karto raaxada bukaanka iyo waqtiyada daaweynta inta badan celcelis ahaan u dhexeeya 60 illaa 90 daqiiqo. Maqaarku wuxuu noqon doonaa casaan oo diirran taabashada, ugu yaraan hal toddobaad oo nasasho ah ayaa la filayaa.
Is-diidmo: Waxaa jira dhowr diidmo oo heer caadi ah, sida infekshannada firfircoon ee aagga daweynta la doonayo. Intaa waxaa dheer, bukaanada isticmaalay isotretinoin lixdii bilood ee la soo dhaafay waa inay sugaan in la daaweeyo. Dib-u-soo-saarista laser-ka ee CO2 sidoo kale laguma talinayo noocyada maqaarka ee madow.
Jajabinta Erbium Laser Resorfacing
Sida ay u shaqeyso: Erbium, ama YAG, leysku waxay adeegsadaan iftiinka infrared si ay u gaarsiiyaan tamarta kuleylka ee ka hooseysa dusha maqaarka. Dib-u-soo-saarista leysarka jajabka ah ee loo yaqaan 'frabial erbium laser' waxay ku abuurtaa maqaarro yaryar oo yar yar (dhaawacyo) maqaarka maqaarka, maqaarka dhexe ee maqaarka, waxyeeleeya kolajka iyo unugyada maqaarka ee da'da ah waxayna keenaysaa soo saarista kolajiin cusub iyo cusboonaysiinta unugyada caafimaadka qaba. Si kale haddii loo dhigo, qaabkan daaweyntu wuxuu sameeyaa nooc ka mid ah uumi-baxa unugyada la xakameeyo si loo daaweeyo loona bogsado maqaarka dhaawacmay si loo hagaajiyo maqaarka maqaarkiisa, midabkiisa, iyo dabacsanaanta.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka: Daaweynta leysarka jajabka ah ee loo yaqaan 'Fractional erbium laser' ayaa si fiican ugu habboon bukaanada waayeelka ah, maaddaama, marka la barbar dhigo microneedling, ay bartilmaameedsadaan unugyada ka hooseeya dusha sare si kor loogu qaado wax soo saarka kolajka. Si kastaba ha noqotee, ma jiro tilmaam adag oo lagu ogaanayo cidda aad ugu da 'yar daweyntahan gaarka ah. Daaweyntani waxay sidoo kale u baahan tahay wakhti dhimis weyn oo casaan ah oo soconaya dhowr maalmood. Daaweynta leysarka jajabka ah ee 'Erbium' kuma haboona maqaarka midabbada madoow sababo la xiriira halista sare ee midabka.
Sababtoo ah: Sababtoo ah laser-ku waxay kululeeyaan maqaarka, waxaa jira waxyaabo badan oo saameyn ah oo laga fiirsado, oo ay ku jiraan walaacyada ku saabsan hyperpigmentation post-inflammatory, oo ay weheliso waqti dheeri ah iyo daryeel daaweyn kadib.